Uyisebenzisa kanjani ikhibhodi yeWindows kwi-Mac | Ndisuka mac
Uyisebenzisa njani ikhibhodi yeWindows kwi-Mac
Nje ukuba siqhele ukusebenzisa ikhibhodi ye-Mac, kuhlala kunzima ukuba sinxibelelane nebhodi yezitshixo yeWindows, nangakumbi, xa kufuneka sitshintshe inkqubo yokusebenza. Iikhibhodi zeMac azifumaneki kuzo zonke iivenkile zekhompyuterKananjalo azifikeleleki njengoko kuthengiswa yi-Apple, ubude bayo buphezulu kakhulu ngexesha, kungoko ixabiso lazo libiza kakhulu.
Kule mpelaveki, bendinelishwa ngokwaneleyo ukuba ndishiye unyana wam abukele imovie kwi-Mac eneglasi yejusi. Ngaxa lithile iglasi yawa kwikhibhodi kwaye ndathi ndakuqonda ukuba lixesha lokuyilungisa. Kuba andinayo iVenkile yeApple kwindawo endihlala kuyo, Ndanyanzelwa ukuba ndithenge ikhibhodi yeWindows kwivenkile yekhompyuter, ikhibhodi endicaphukise ngokupheleleyo ngokunganikeli ngemisebenzi efanayo.
Ngethamsanqa I-Apple isivumela ukuba sitshintshe ubumbeko lwebhodi yezitshixo, iApple okanye iiWindows, ukuze amaqhosha enze imisebenzi esiyifunayo. Kule meko ukuze ndiqhubeke nendawo enye yezitshixo, ndifuna isitshixo se-Alt ukuba sibe sisitshixo soMyalelo kunye nesitshixo seWindows kwiqhosha lokukhetha, ukugcina ukusebenza ngokufana nekhibhodi yokuqala yeApple.
Ngale nto ndiya kuyo Ukukhetha kweNkqubo> Ikhibhodi.
Ngaphakathi kwimenyu yezitshixo, cofa apha Amaqhosha okulungisa, emi emazantsi ekunene kukhetho lwebhodi yezitshixo.
Ngoku ndityhila kwi Iqhosha lokukhetha kwaye ukhethe Myalelo kwi Isitshixo somyalelo, ndikhetha Ukhetho.
Ngoku isitshixo se-Alt kwikhibhodi yeWindows siya kuba sisitshixo soMyalelo ⌘ kwikhibhodi ye-Mac, kwaye isitshixo seWindows kwibhodi yezitshixo siya kuba sisitshixo se-Alt (Option) ⌥ kwikhibhodi ye-Mac. Qhubeka nokusebenzisa indibaniselwano efanayo yezitshixo okanye ukusebenza esikunikwa yibhodi yemveli yeMac, kodwa ukuyenza kwikhibhodi yeWindows, kulungile ndide ndithenge enye ikhibhodi yeMac okanye ndilungise eyaphukileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Uyisebenzisa njani ikhibhodi yeWindows kwi-Mac
Ayisebenzi kum, andikwazi ukukopa nokuncamathisela njengakuqala nge-C command V command nge-Alt c kunye ne-alt V yalebhodi yezitshixo entsha ndenza into oyithethayo
IApple ikhupha ngokusesikweni iMacOS Sierra 10.12.5